Dugsi | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Dugsi
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 7 2018
Caruurta oo dhan xaq ayay u leeyihiin waxbarasho. Degmada ayay waajib ku tahay in boos lagaa siiyo iskoolka. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca qawaaniinta jirta iyo nooca taageero ee aad heli karto si aad u awoodo inaad inaad dhigato iskoolka iswiidhishka.
Waxaad xaq u leedahay Ilmahaagu xaq ayuu u leeyahay nidaamyada iskool ee dugsiga xanaanada, fasalka barbaarinta, dugsiga hoose, dugsiga hoose ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay, dugsi gaar ah iyo hoyga xilli firaaqaha.
Haddii aad tahay magan-gelyo doon waxaad xaq u leedahay waxbarashada dugsiga sare ama dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay haddii aad bilowdo waxbarashadaada ka hor intaanad buuxin 18 sano.
Haddii aad haysato sharciga deganaansho oo aad ka diiwaan gashantahay ama ka diiwaan gashanaan doonto degmo waxaad xaq u leedahay inaad bilowdo waxbarashadaada dugsiga sare ama dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ilaa iyo kala barka sanadka ugu horeeya ee sanadka aad adigu buuxinayso 20 sano.
Waajibka iskool dhigashada waxay tahay in ay khasab tahay inaad dhigato iskoolka haddii aanay jirin sabab macquul ah in aanad sidaas samayn.
Haddii aad dhigato dugsiga hoose-dhexe, haysato sharciga deganaansho kana diiwaan gashantahay ama ka diiwaan gashanaan doonto degmo waxaa waajib kugu ah iskool dhigasho. Waajibka iskool dhigashada waxay bilaabantaa xilli dugsiyeedka dayrta aad buuxinayso lix sano. Waajibka iskool dhigashada badanaaba waxay socotaa toban sano. Waajibka iskool dhigashada waxay u dhigantaa xaqa waxbarasho.
Degmadaada ayay waajib ku tahay inay ku siiyaan boos ah iskoolka. Haddii aad tahay magan-gelyo doon waa inaad bilowdaa dugsiga hoose-dhexe ama lagu siiyaa boos ah dugsiga sare sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah, tani waa inay dhacdaa ugu dambeyn hal bil ka dib markii aad timi Iswiidhan. Haddii aad haysato sharciga deganaansho waa inaad bilowdaa dugsiga hoose-dhexe ama lagu siiyaa boos ah dugsiga sare sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.
Marka aad bilowdo dugsiga hoose-dhexe waxay shaqaalaha iskoolka u baahanyihiin inay darsaan waxa aad hore u taqaanay. Daraasadayntan waxay shaqaalaha iskoolka tix-geliyaan da'daada, aqoontaada hore iyo xaaladahaaga qof ahaan. Laba bilood gudaheed kana soo bilaabmaysa markii aad bilowday iskoolka waa in maamulaha iskoolkan go'aamiyaa sanad-dugsiyeedka iyo fasalka aad dhigan doonto. Daraasadaynta aqoontaada waxaa loo isticmaalaa si loo sii wado qorshaynta waxbarashadaada. Xilliga araasadayntan waxaa la isticmaalaa turjubaan ama macalin ku hadla afkaaga hooyo.
Dhinaca dugsiga sare waa in macalimiintu ay si joogto ah u sameeyaan qiimeynta aqoontaada. Qiimeyntan ayaa aldhig u ah sii waditaanka waxbarashadaada.
Maaha khasab in la tago dugsiga sare. Dhinaca dugsiga sare waxaad dhigan kartaa arnaamijyada qaran ee kala duwan ama barnaamijka soo gelida. Dhinaca barnaamijyada qaran waxaa ka jira barnaamijyada u diyaarinta xirfada iyo barnaamijyada u diyaarinta jaamicada.
Si aad u awoodo inaad tegi karto barnaamijka u diyaarinta xirfada waxaa loo aahanyahay in aad ku baastay iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah, ingiriisi, xisaab iyo shan maado oo dheeraad ah. Waxay tahay in loo baahanyahay ku baasida isu geyn sideed maado.
Si aad u awoodo inaad tegi karto barnaamijka u diyaarinta jaamicada waxaa loo aahanyahay in aad ku baastay iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah, ingiriisi, xisaab iyo sagaal maado oo dheeraad ah. Waxay tahay in loo baahanyahay ku baasida isu geyn laba iyo toban maado.
Haddii adigu aanad geli karin barnaamijyada qaran waxaad dhigan kartaa mid ka mid ah barnaamijyada soo gelida. Barnaamijyada soo gelida way dabacsanyihiin markay noqoto xawaaraha waxbarasho, baahsanaanta iyo nuxurka. Barnaamijyadani waa inay xitaa waafaqsanaadaan aqoontaad hore u haysatay iyo baahidaada.
Adiga ugu badnaan laba sanno ayaa lagu siin karaa waxbarashada fasalka sii diyaarinta. Hadafku in adigu aad hal ama dhowr maado ku barato fasalka sii diyaarinta waa in aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah aad diyaar ugu noqoto la socodka waxbarashada fasalada caadiga ah. Dhinaca fasalka sii diyaarinta waxaad ku baranaysaa maadooyin kala duwan isla markaana ku baranaysaa aasaaska luqada iswiidhishka.
Adigu waxbarashadaada oo dhan ma ku qaadan kartid fasalkan. Inta ay leegtahay qaybta waxbarasho ee ka dhacaysa fasalka sii diyaarinta iyo inta ay leegtahay qaybta axbarasho ee ka dhacaysa fasalka caaadiga ah ay kala duwantahay qof kastaba. Waa maamulaha iskoolkan qofka go'aaminaya sida waxbarashadan loo qorshaynayo.
Macalimiintu waa inay qiimeeyaan aqoontaada dhinaca maadooyinka kala duwan ee asalka sii diyaarinta. Marka macalimiintu qiimeeyaan in aad ka soo bixi karto hal maado oo ah dhinaca fasalka caadiga ah waa in aad ka qayb qaadataa waxbarashadan oo sidaas lagu badelaa.
Dhinaca dugsiga hoose-dhexe waxaad heli kartaa waxbarashada maadada iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Adigaaga iswiidhishku anu kuu ahayn luqadaada hooyo waxaad baran kartaa iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah haddii aad u baahanyahay tan. Waa maamulaha iskoolka qofka go'aaminaya haddii aad baranayso iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Adiga, wakiilkaaga caruurta ama qofka haysta mas'uuliyada waalidnimo ee gaarka ah ayaa la xiriiri kara maamulaha iskoolka haddii aad u baahantahay dhigashada iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Dhinaca dugsiga sare waxaad ku baran kartaa koorsada iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah.
Dugsiga hoose-dhexe waxaad ku lahaan kartaa qorshaha hmiyada saacadaha. Haddii aad haysato qorshaha ahmiyada saacadaha waxay tani tahay inaad heli karto waxbarasho dheeraad ah dhinaca iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah.
Si aad u heli karto wakhti dheeraad ah dhanka iswiidhishka waa in wakhti laga jaraa waxbarashada maadooyinka kale. Isu geynta wakhtiga waxbarasho isku mid ayay noqotaa, laakiin waa la qaybiyaaa wakhtiga axbarasho si wakhti dheeraad ahi u noqdo dhinaca iswiidhishka ama iswiidhishka oo luqad labaad ahaan ah. Waa maamulaha skoolka qofka go'aaminaya haddii aad helayso qorshaha ahmiyada saacadaha. Waxaad haysan kartaa qorshaha ahmiyada saacadaha ugu badaan hal sano.
Adigu waxaad xaq u yeelan kartaa waxbarashada afka hooyo haddii aad leedahay af ooyo oo aan ahayn iswiidhish. Dhinaca dugsiga hoose-dhexe iyo dugsiga sare waxaad xaq u leedahay waxbarashada afka hooyo haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo. Haddii aad oonaysid waxbarashada afka hooyo markaasi waa inaad codsataa. Adiga, wakiilkaaga caruurta, qofka haysta mas'uuliyada waalidnimo ayaa weydiin kara iskoolka sida aad samaynayso iyo nooca shuruudaha ku xiran.
Caawinta waxbarasho ee afka hooyo waxay muhiim u tahay in la awoodo in la xoojiyo aqoontaada iyo waxaad hore u taqaanay. Adigu waxaad helaysaa caawinta waxbarasho ee afka hooyo haddii aad u baahantahay. Waxaad la xiriiri kartaa macalimiintu ama aamulaha iskoolkan si loo helo warbixin dheeraad ah oo ku aabsan caawinta waxbarasho ee afka hooyo.
Haddii adigu aad tahay inta u dhaxaysa 17–21 sano oo aad timi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah, waxaad wax ku baran kartaa nidaamka dugsiga dadka waaweyn. Nidaaamka dugsiga dadka waaweyn waa waxbarashada ugsiga dadka waaweyn. Halkaasi waxaad ku dhiganaysaa koorsooyinka dugsiga sare. Waad ka bilaabi kartaa waxbarashadaada xitaa haddii aanad haysan qaar ka mid ah maadooyinka dugsiga hoose-dhexe. Waxaa wax la bartaa iyadoo la yahay kooxo yar oo waxaad helaysaa caawimaad badan.
Adigu badanaaba waxaad ku noolanaysaa dugsiga dadka waaweyn. Sidaasi markay tahay waxaad helaysaa qol gaar kuu ah. Waxaa ku jirta quraacda, qadada iyo mararka qaarkood cashada. Waxbarashadan waa bilaash oo waxaad fursad u haysataa inaad kaalmada waxbarasho ka codsato Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda. La hadal qofka xiriirkaaga qaabilsan ee jooga hoyga HVB, macalimiintaada dugsiga sare, ama xoghayntaada arrimaha bulshada wixi ku saabsan nidaamka dugsiga dadka waaweyn.
Ka dib markaad dhamayso waxbarashadaada dugsiga dadka waaweyn waxaad wax ka baran kartaa jaamicad, jaamicad sare iyo machad xirfadeed.
Akhri dheeraad ku saabsan nidaamka dugsiga sare oo ku qoran bogooda. Warbixintan waxaa lagu helayaa Iswiidhish oo keliya.
Xiriiryada bogaga kale ee Information om Sverige
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan waxa dugsiga dadka waaweyn yahay. Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan kaalmada waxbarasho.